Ny omaly tsy miova !
Nivoaka ny valim-pifidianana ofisialy vonjimaika. Afa-bela izany ny CENI. Asa aloha na hampiova zavatra ny fitoriana samihafa eny am-pelatanan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Saika efa mibitaka sy manao fety be mantsy ny ankamaroan’ireo mitarika amin’ny isa vonjimaika, indrindra ireo kandidam-panjakana. Mbola manantena sy mivavabavaka hitsimbadihan’ny vokatra kosa ireo kandida mahatsiaro ho lasibatry ny zavatra tsy ara-drariny. Toa lasitra ho an’ny fifidianana ho avy foana ny zava-nisy niainga tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena sy izao fifidianana solombavambahoaka izao. Nandeha ny kiana samihafa, nandeha ny fitoriana tamin’ny fifidianana filoha, kinanjo ny 99% dia azo noraisina fa tsy mitombina. Nandeha ny fifidianana depiote, ka toa maro no nanao izay saim-patany tamin’ny hala-bato sy hosoka. Efa manantena ny hisian’ny didy fakan-tahaka amin’ny azo raisina fa tsy mitombina ny sasany. Sarotra ny hisiana fitsimbadihana rasa goavana intsony amin’ny isan’ny depiote azo. Ny zava-misy, dia toa milaza sy maneso indraindray fa hadalan’izay tsy nanao hosoka sy nandika lalàna. Tonga dia hiroso amin’ny fifidianana ben’ny tanàna indray ary ve isika ? Mbola azo antoka ve ireo rafitra miantsoroka ny fifidianana izay efa namoaka tetiandro sahady ? Tena mila fandaminana goavana sy fitsipi-dalao madio ny politika sy ny fifidianana eto, mba tsy ho ny omaly tsy miova hatrany.